प्रवास : को हुन् एन आर एन ए मेरिल्याण्ड अध्यक्षका प्रत्याशी घिमिरे ? | ebaglung.com
२०७५ चैत्र २१, बिहीबार ०९:२६	Top News, थप समाचार
मेरिल्याण्ड,(युएसए) २०७५ चैत २१ । ठण्डीले चिसिएको मौसम रापिलो बन्न थालेसँगै एन आर एन एको आसन्न निर्वाचनले गैर आवासीय नेपालीहरूको सामुदायिक वातावरण पनि तात्न थालेको छ । तुलनात्मक रूपले सानै भएपनि संयुक्त राज्य अमेरिकाभरिका राज्यहरूमा सबैभन्दा बढी सदस्य हुने मध्ये ते़श्रो ठूलो राज्य मेरिल्याण्डको चुनावी माहौल पनि गर्माउन थालेको छ ।
यसैबीच नेपाली जनसंपर्क समिति अमेरिका मेरिल्याण्ड च्याप्टरका सचिव डोलनाथ घिमिरेले पनि एन आर एन ए मेरिल्याण्ड अध्यक्षका लागि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
को हुन् त अध्यक्षका दाबेदार घिमिरे ?
सानै उमेर देखि राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधिमा सक्रियतापूर्वक संलग्न घिमिरे आफ्नो स्कूले जीवनमा नै चितवनको ऐतिहासिक हाई स्कुल शारदानगरको नेपाल विद्यार्थी संघको इकाइ अध्यक्ष भएका थिए । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दौरान पटक पटक थुनामा परेका उनी मनको कुरा स्पष्ट राख्ने हक्की स्वभावका मानिन्छन् । बुवाको प्रेरणाले सामाजिक गतिविधिमा लाग्न उत्प्रेरित बनेका डोलनाथ घिमिरे चितवन जिल्लामा अत्यन्त लोकप्रिय नाम हो ।रेडक्रस लगायत अन्य विभिन्न सामाजिक संघ संस्था तथा क्लबहरूमा सक्रीय थिए । रेडक्रसको आजीवन सदस्य समेत रहेका घिमिरेले सन् २०१२-१३ का लागि लायन्स क्लब भरतपुर हाइटको अध्यक्ष भई काम गरेको अनुभव संगालिसकेका छन् ।
बिद्यामन्दिर केन्द्रमा प्राविधिक धारका १ सय ६८ जना बिद्यार्थीले SEE परीक्षा दिए !